१५ माघ, २०७७ – Mero UK
Day: १५ माघ, २०७७
१५ माघ, २०७७ १५ माघ, २०७७ / रातोपाटी
टीकापुर घटना भएको छ वर्ष बितिसकेको छ । त्यसको चर्चा भने अझै सेलाएको छैन । त्यही घटनाका कारण जननिर्वाचित भइसकेका रेशम चौधरीलगायतका व्यक्ति थुनामा छन् । उक्त घटनाका आरोपी अझै भागीभागी हिँड्नु परेको छ । टीकापुरका जनताको मनबाट त्रास अझै हराएको छैन । कतिबेला के हुने हो कुनै ठेगान छैन । यता रेशम चौधरीलगायतका नेताको …
निर्दोष छन् भन्दै हिँड्ने प्रधानमन्त्री ओलीले किन रिहा गर्दैनन् रेशम चौधरीहरूलाई ? Read More »
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सिंहदरबारमा आज इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले मुलुकको कुनै पनि भूगोलमा ईन्टरनेट सेवा सहज पहुँच गराउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।उनले इन्टरनेटको सेवाप्रति गुनासो आइरहेको स्मरण गर्दै गाउँगाउँमा ईन्टरनेटको पहुँचलाई प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । यसका …
इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ : मन्त्री गुरुङ Read More »
पोखरा । कोरोना महामारीविरुद्ध नेपालमा पनि खोप अभियान सुरु भइसकेको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकसँगै नेपालमा पनि खोप अभियान सुरु भएको छ । प्रारम्भिक चरणमा ‘फ्रन्टलाइनर’ हरुलाई खोपको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।सामान्यतया लामो अनुसन्धानपछि मात्र कुनै पनि खोप प्रयोगमा ल्याउने गरिन्छ । तर कोरोनाविरुद्धको खोप भने छोटो समयमै प्रयोगमा ल्याइएको छ । त्यसैले खोप लगाउने …
कोभिशिल्ड लगाएकाहरू भन्छन् : खोपसँग डराउनु पर्दैन, हामीमा कुनै समस्या देखिएको छैन Read More »
मनमोहनलाई सय रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो, ओलीलाई के होला ?
१५ माघ, २०७७ १५ माघ, २०७७ / अनलाइन खबर
१५ माघ, काठमाडौं । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिखित जवाफसहित बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र आफैँ अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । यससँगै प्रश्न उठेको छ, बहालवाला प्रधानमन्त्री अब अदालतमा हाजिर होलान् कि नहोलान् ? विगतको परम्परा के छ ? सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि विभिन्न मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई …
मनमोहनलाई सय रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो, ओलीलाई के होला ? Read More »
पुनर्निर्माणपछि जापानले हस्तान्तरण गर्‍यो बीपी राजमार्ग
१५ माघ, काठमाडौं । जापान सरकारले निर्माण गरेको विपी राजमार्ग भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सकेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । विहिबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रम मार्फत जापानले उक्त सडक नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको हो । पुनर्निर्माण गरिएको विपी राजमार्गको भर्चुअल उद्घाटन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री माननीय बसन्तकुमार नेम्बाङले नेपालको विकास निर्माणमा …
पुनर्निर्माणपछि जापानले हस्तान्तरण गर्‍यो बीपी राजमार्ग Read More »
टिमलाई प्रेसर नहोस् भनेर सातौं नम्बरमा ब्याटिङ गरेँ : विनोद भण्डारी
१५ माघ, काठमाडौं । चौथो संस्करणको प्रधानमन्त्री कप पुरुष क्रिकेटको पहिलो खेलमा चौथो नम्बरमा ब्याटिङ गरेका त्रिभुवन आर्मी क्लबका कप्तान विनोद भण्डारीले गण्डकी विरुद्ध नटआउट १११ रन बनाए । समूह चरणमा तीन खेलमा चौथोमै ब्याटिङ गरेका उनी एक खेलमा पाँचौ नम्बरमा झरे । बिहीबार बागमती प्रदेशविरुद्ध सेमिफाइनलमा विनोदले लोअर अर्डर अर्थात सातौं नम्बरमा ब्याटिङ गरे । …
टिमलाई प्रेसर नहोस् भनेर सातौं नम्बरमा ब्याटिङ गरेँ : विनोद भण्डारी Read More »